नोटहरू र ज्याक लन्डन - Ikkaro द्वारा बत्ती जलाउने समीक्षा
मुख्य पृष्ठ >> किताबहरु >> ज्याक लन्डन द्वारा एक अलाव जलाउनुहोस्
अनुवाद यस मा स्ट्यान्फोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित काम मा आधारित छन् जैक लन्डनको पूर्ण कथाहरूको क्यानोनिकल संस्करण.
१ 1907 ०। मा उनले यसलाई सेन्चुरी म्यागजिनका लागि दोहोर्‍याए र १ 1910 १० मा यो हराएको अनुहार खण्डमा संकलित भयो।
यी चित्रणहरु राउल एरियास मैले तिनीहरूलाई हार्डकोभर र ठूलो साइजमा किंग लिरि प्रकाशन घरको संस्करणमा देखिसकें। यो एक भोल्युम हो जुन मैले सार्वजनिक पुस्तकालयमा पहिलो पटक पढें। यस पछि मैले रेइनो डे कर्डेलियाको संस्करण फेला पारें जुन मैले खरीदमा अन्त गरें।
एक तरिकामा उनीहरूले मलाई Agust Comn Comotto का चित्रणका लागि सम्झाउनु पर्छ २००० पानीमुनि यात्राको लीगहरू, भेर्न सबैभन्दा मनपराएको पुस्तक अहिले सम्म।
चिसो जाडोको दिनमा एकै बैठकमा पढ्नु यो कहानी हो। यो एक शानदार, गहन कथा हो जसले तपाईंलाई मुख्य पात्रको जुत्तामा राख्छ र उसको कष्ट, उसको पीडा याद गर्दछ। यसले यी इनहोस्प्यालिबल ठाउँहरूको कठोरता प्रतिबिम्बित गर्दछ। ज wild्गलीमा प्रकृति र कती सानो र असुरक्षित मानिस हो।
१ 1907 ०XNUMX को संस्करण मेरो भन्दा राम्रो देखिन्छ। कि त्यहाँ कुनै संवाद छैन र तपाईं केवल नायकको विचार देख्नुहुन्छ तपाईंलाई कथामा डुबाउनुहोस्। यात्राको दौडान उहाँसँगै आएका कुकुरको उपस्थिति मलाई लागी एक शानदार स्रोत र एकको याद आउँदछ जुन तपाईंले पहिलो संस्करण पढ्दा हराइरहेको छ।
यो लन्डन पढ्न सुरु गर्ने उत्तम तरिका हो। यो कामको लागि ठूलो समानता दिन्छ जंगली को कल y सेतो टस्क। लेखक द्वारा अर्को काम जुन मैले धेरै वर्ष पहिले पढें र म चाहन्छु तारा को भांडेर.
२१ बर्षको उमेरमा लन्डन अलास्काको लागि गोल्ड खोज्नको लागि यात्रा गर्यो, महसुस गर्‍यो र यसका किनारमा चिसो बाँच्थ्यो Klondike। उहाँ पहिलो व्यक्तिमा तीव्र चिसो बाँचिरहनु भएको थियो, उहाँ ती ज through्गलहरू हुँदै जानुभयो र ती सबै अनुभवहरू यस कथामा छापिएका छन्।
केहि जिज्ञासु चीजहरू पुस्तकबाट स .्कलन गरियो।
Zeroº डिग्री सेन्टिग्रेडबाट शून्य तल कसैसँग यात्रा गर्नु आवश्यक छ
तिनीहरू बिर्चको बार्कले बनेको टिन्डर प्रयोग गर्दछन्। मैले यस विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ।
थप चाखलाग्दा तथ्यहरू
एक मौसम स्टेशन द्वारा पृथ्वीमा रेकर्ड गरिएको न्यूनतम तापमान--89,2 .२ डिग्री सेल्सियस रहेको छ। यो पूर्वी अन्टार्कटिकामा रसियामा भोस्टोक बेस (स्रोत) मा रेकर्ड गरिएको थियो राष्ट्रिय भौगोलिक)। तर जिओफिजिकल रिचर्च पत्रहरूमा २०१ 2018 को अध्ययनमा (पूर्वी अंटार्कटिकामा अल्ट्रालो सतह तापमान उपग्रह तापीय इन्फ्रारेड म्यापि Fromबाट: पृथ्वीमा सबैभन्दा चिसो ठाउँहरू।) उपग्रह डेटाको विश्लेषण गर्ने वैज्ञानिकहरूले--० डिग्री सेल्सियसको तापक्रम देखे
4 थप चाखलाग्दा तथ्यहरू